FireFox | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Firefox ပေါ်တွင် PDF ဖိုင်များကို အလွယ်တကူ ပြုလုပ်ခြင်း
အင်တာနက် အသုံးပြုရင်း pdf ဖိုင်တွေကို အလွယ် တကူနဲ့ ပြုလုပ် ချင်တယ် ဆိုရင် Soda PDF ဆိုတဲ့ add-on ကို ထည့်သွင်း သုံးစွဲနိုင် ပါတယ်။ soda pdf ဟာ document file တွေကို convert ပြုလုပ်ဖို့ အတွက် စီစဉ်ပေး ထားတဲ့ add-on တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ add-on ကို ထည့်သွင်းဖို့ အတွက် ဒီနေရာ ကနေ ရယူ နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ add-on page ကိုရောက်ပြီ ဆိုရင် Add to Firefox ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် Install now ဆိုတဲ့ button ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပါ add-on ကို install ပြုလုပ် ရပါမယ်။ Install ပြုလုပ် ပြီးရင် Firefox browser ကို Restart ပြုလုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် Restart ဆိုတဲ့ button လေးကို နှိပ် လိုက်ပါ။
ပြီးသွားရင် Soda pdf converter ကို အသုံးပြုဖို့ အတွက် Firefox browser ရဲ့ ညာဘက်ထောင့် အပေါ်နားလေးမှာ Soda PDF online service ဆိုတဲ့ logo လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် document တွေကနေ PDF ကိုပြောင်းမှာလား PDF ကနေ Document တွေကို ပြောင်းမှာလား ဆိုတာတွေကို ရွေးချယ် နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ add-on ဟာ Word, Excel, Power Point, Image, HTML File, Text File များကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ပေး ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Pdf ဖိုင်များကိုလည်း ခွဲနိုင်၊ ဆက်နိုင်စေရန် အတွက်လည်း စီစဉ်ပေးနိုင်မယ့် နည်းပညာတွေကို ထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းဟာ PDF ဖိုင်တွေကို ပြုလုပ်ဖို့ အတွက် နဲ့ convert ပြုလုပ်ဖို့ အတွက် အခြားသော ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ထည့်သွင်း စရာမလိုဘဲ Firefox browser ပေါ်ကနေ အလွယ်တကူနဲ့ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး လုပ်ဆောင်ပေး နိုင်မယ့် နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
Original link - http://www.internetjournal.media/how-to/3694
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, September 27, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ AddOn, Converter, FireFox, PDF
Firefox ထဲက Cookies တွေကို Browser ပိတ်တာနဲ့ ရှင်းပစ်မယ်
ကျွန်တော်တို့ Firefox Browser ကို Cookies တွေ၊ Cache တွေကို ရှင်းလင်းတဲ့ အကြောင်းအများစု ရေးထား
တာ ရှိကြပါတယ်။ Software တွေနဲ့ ရှင်းတဲ့ အပြင် Browser ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Function တွေနဲ့လည်းရှင်းလင်း
ကြရ ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော် ပြောမှာ ကတော့ အထွေ အထူးကြီး မဟုတ် ပါဘူး။ Browser ထဲမှာ ပါဝင် တဲ့
Check Box လေး တစ်ခုကို On ပေး လိုက်ရုံဖြင့် Browser ပိတ်လိုက်တိုင်း Cookies တွေကို Auto ရှင်းပေးတဲ့
ကဲ စလိုက်ရအောင် ... ။
အရင်ဆုံး သင့် Browser ကို ဖွင့်ပြီး အောက်ပါ ပုံအတိုင်း
ညာဘက်ထောင့်နားလေး ကနေပြီးတော့ Options ထဲကို ၀င်လိုက်ပါမယ်။ ထို့နောက်
အထက်ပါ ပုံအတိုင်း Privacy ထဲမှ လက်ရှိ ဖြစ်နေသော Remember History ဆိုတာကို Use custom settings
For history ဆိုတာကို ရွေးပေးရ ပါမယ်။ ပြီးသွား ရင်တော့
အထက်ပါ ပုံအတိုင်း မျှားအနီရောင် ပြထားတဲ့ နေရာလေးကို Clear history when firefox close ဆိုတာကို
ရွေးပေးပြီး OK နှိပ်ပေး လိုက်ရုံပါပဲ ။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ Browser, FireFox, နည်းပညာ
Facebook ၏ ကြိုက်ရာ နေရာတွင် Facebook Sticker ကွန်မန့်ပေးနည်း (PC Only)
အရမ်း လွယ်ကူ ပါတယ် မိမိ Browser မှာ ထည့်ပေးရမည့် Add နှစ်ခုကို မူရင်းလင့်မှာ သွားရောက် ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
လင့်များကို အောက်မှာ ပေးထားပါတယ်။
ဒေါင်းပြီးတာနဲ့ အင်စတော လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ် ပြီးရင် မိမိ FB အကောင့်ကို ထွက်ပြီး ပြန်ဝင်လိုက်ပါ။ ကွန်မန့်ပေးရ
မည့် အကွက်မှာ ပုံထဲက အတိုင်း မျက်နှာ ပုံလေးပေါ် လာပါမယ် နှိပ်၍ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရုပ်များကို မန့်နိုင်
ပေးထားတဲ့ Hola Unlock Add လဲ အပေါ်ကနည်း အတိုင်းပါပဲ နိုင်ငံကိုတော့ Australia ကို ရွေးချယ်ပေးရမည်ဖြစ်
ပါတယ် ။ မူရင်းဆိုက်မှာ ပုံနှင့် တကွ ပြသထားလို့ မရှင်းပြတော့ပါဘူး ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးယုံပါပဲ :)
Emoji အရုပ် အတွက် Facebook Secret Emoticons Add ကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ။
▼ Mozilla Firefox အတွက် ▼ OR ▼ Google Chrome အတွက် ▼
Facebook Sticker အတွက် Hola Unlock Add ကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ ။
▼ Hola Unlock Add ▼
Credit to maungpauk.org
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, December 08, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ AddOn, Facebook, FireFox, Google
Firefox Browser မှာ လင့်တွေနှိပ်ရင် ဝင်းဒိုး အပိုတွေ မပေါ်စေရန် နည်းလမ်း
Mozilla Firefox မှ Website တွေဝင်ရင် ကြောငြာ ကို Block နည်းပါ။ (Web Page တွေကို တချက် ကလစ်
လိုက်ရင် ကြော်ငြာ ၃ခု ၄ခု တက်လာတာကို ပိတ်နည်းပါ။)
ကျနော်တို့ Website တွေဝင်ရင် တချို့ နိုင်ငံခြား ဆိုဒ်တွေမှာ Web Page ကို တချက် ကလစ်လိုက်ရင် Website
၃ခု ၄ခု အထိ ကြေငြာတွေက တတ်လာလို့ အာရုံ နောက်ရပါတယ်။
အဲတာတွေကို တက်မလာအောင် ကြော်ငြာတွေကို Block လုပ်နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော် များတော့ သိပြီး
သား ထင်ပါတယ်။ အခုနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြစ် Internet Speed နှေးမသွားပါဘူး။ စိတ်ညစ်တာက
ကြော်ငြာ Web Page တွေ တတ်မလာတော့ အာရုံနောက် သက်သာတာပေါ့။ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာ ပုံနှင့်
အရင်ဆုံး မိမိ အသုံးပြုနေတဲ့ Mozilla Firefox မှ Tool / Add-Ons ကိုဝင်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Ddd-Ons Page တက်လာပါမယ်။ အောက်ကပုံကို ဆက်ကြည့်လိုက်ပါ။ Search နေရာမှာ Adblock Edge
ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Adblock တက်လာရင် ညာဘက်က မြားပြ ထားတဲ့ Install
ပုံကစာကို သေချာမမြင်ရင် မောက်နဲ့ ကလစ်ပြီး ချဲ့ ကြည့်လိုက်ပါ။ Install ကိုနိပ်ပြီး ရင် Add-ons က Download
တက်နေပါပြီ။ ပြည့်ရင် Mozilla Firefox ကို (Restart) ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ။ အဲတာပြီးရင်တော့ မိမိ သွင်းထား
တဲ့ Adblock Edge က ကောင်းကောင်း အလုပ် လုပ်ပါပြီ။ ဘယ် Web Page ၀င် ၀င် အာရုံနောက် စရာ ကြေငြာ
တွေ တက်မလာတော့ပါဘူး။ ဒီလောက်ဆို အားလုံး လုပ်တတ်လောက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဘလော့ခရီးသည် by ဇော် မင်း သန်း
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, October 19, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ AddOn, FireFox, နည်းလမ်းများ
သိထားသင့်တဲ့ firefox ရဲ့ Sync အကြောင်း
firefox အသုံးပြု သူများ အတွက်ပါ။ မိမိတို့ အင်တာနက်မှာ bookmarks လေးတွေ လုပ်ပြီး သိမ်းထားတတ်
သူတွေ အတွက်ပါ။ မိမိမှတ်သား ထားတာလေးတွေ ကို မိမိ တို့စက် မှာ windows အသစ်တင်တဲ့ အခါ
ပျောက်သွားမှာကို စိုးရိမ် စရာမလို တော့ပါဘူး။
အဲဒီအတွက် firefox မှာ sync account ဖွင့်ပြီး တော့ ပုံမှန် အသုံးပြု လိုက်ရုံပါပဲ။ firefox မှာ sync Account
ဖွင့်ဖို့ အတွက် မိမိ တို့ရဲ့ gmail Account နဲ့ အရင်ဆုံး Sin up လုပ်ရပါမယ်။ မိမိနှစ်သက်တဲ့ password ပေး
ပြီး Sing up လုပ်ခဲ့တဲ့ Email မှာ Verify လုပ်ပေးပြီး ရုံပါပဲ....
Windows အသစ် တင်တိုင်း firefox မှာ sync Account ကို sin in ဝင်တာနဲ့ မိမိ မှတ်သားထားတဲ့ book
marks, tab, password, Add on တွေကို အလွယ်ကူဆုံး ပြန်လည်ရယူ နိုင်ပါပြီ။
အောက်မှာ အသေးစိတ်ကို ပုံနှင့် တစ်ကွ ရှင်းပြပေးထားပါ တယ်။
အဆင့် ( ၁)
firefox setting / option မှာ အောက်က ပုံလေး အတိုင်း Sync ကိုနှိပ်ပါ။ Create Account ကို နှိပ်ပေးပါ။
အဆင့် ( ၂ )
မိမိရဲ့ Register လုပ်မဲ့ Email လိပ်စာနှင့် Password ကို ထည့်ပါ။ year of Birth မှာ မိမိ မွေးသက္ကရာဇ် ကို
ထည့်ပေးပါ။ ပြီးရင် Next ကိုနိုပ်ပါ။
အဆင့် ( ၃ )
မိမိ Register လုပ်ခဲ့တဲ့ အီးမေး ကို ဖွင့်ပါ ။ firefox sync ကို verify ဖြစ် ဖို့ ပေးပို့ လာတဲ့ link ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် ( ၄ )
မိမိ sync လုပ်လိုတဲ့ tabs, bookmarks စသည်ဖြင့် မိမိ နှစ်သက်သလို စီစဉ်ပါ။ ပြီးရင် အားလုံးပြီး ဆုံးသွားပါပြီ။
Frpm: ဘလော့ခရီးသည် by sai thu
မျှဝေသူ Ming Y Rau မှာ Sunday, October 05, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ FireFox, Security, နည်းလမ်းများ
Firefox တွင် Save လုပ်ထားသည့် Password များကို အလွယ်တကူ စီမံ ခန့်ခွဲခြင်း
Password လုံခြုံရေးသည် အင်တာနက် သုံးစွဲသူတိုင်း အလေး ထားရမည့် အချက်တစ်ချက် ဖြစ်သည်။ Browser များတွင်
password များကို မှတ်ထားနိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို ထောက်ပံ့ပေးထားသော်လည်း ၎င်း option ကို အလွယ်တကူ ရှာ
မတွေ့နိုင်သလို သုံးလေ့ သုံးထ မရှိသူများ အတွက်လည်း browser တွင် မှတ်ထားသည့် password များကို မေ့ပြီး ပြန် မ
ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးများ အတွက် Saved Password Editor ဟုခေါ်သော Firefox add-on ဖြင့် မှတ်ထားသည့်
password များကို အလွယ် တကူ သိရှိစေနိုင်သည်။ ၎င်း add-on သည် Firefox တွင် မှတ်ထားသည့် password များကို
web form တစ်ခုပေါ်တွင် right-click တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် save, edit, delete စသည်ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Web form ဆို
သည်မှာ username နှင့် password လိုအပ်သည့် မည်သည့် login page ကိုမဆို ခေါ်ဆိုသည်။
Saved Password Editor ကို Firefox Add-on ဝက်ဘ်ဆိုက် တွင် download ပြုလုပ် ရုံဖြင့် အလွယ် တကူ အသုံးပြုနိုင်
သည်။ Web form တစ်ခုပေါ်တွင် right-click နှိပ်လိုက်သည့် အခါ Save login info, Edit login info နှင့် Delete login
info စသည့် option သုံးမျိုးအနက်မှ တစ်မျိုးကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Page တစ်ခုကို log in information ကို Firefox တွင် သိမ်းဆည်းလိုသည့်အခါ Save login info ကိုနှိပ်ပြီး ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Username နှင့် password ကို ပြောင်းလဲလိုသည့်အခါ Edit login info ကို ရွေးချယ်ပြီး လိုအပ်သည့် ပြောင်းလဲမှုများ ပြု
Browser တွင် သိမ်းဆည်း ထားသည့် password ကို ဖယ်ရှား လိုသည့် အခါ Delete login info ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Delete ပြုလုပ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ save လုပ်ထားသည့် login ကိုသာ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
From: Internet Journal
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, August 27, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Browser, FireFox, နည်းပညာဆောင်းပါး, နည်းလမ်းများ
Computer နှင့် သုံးတဲ့ firefox browser မှာ မြန်မာစာလုံးတွေ ပြင်ကြ ရအောင်
သတိထား မိကြမလား မသိဘူးဗျာ ကျွန်တော်တို့ PC ပေါ်မှာ သုံးနေတဲ့ firefox browser မှာ တစ်ချို့ မြန်မာစာတွေ
ဖုန်းတွေ မှာလို ( -ျ ) လေးတွေ( -ု ) ( -ာ) လေးတွေ ကပ်နေ တာကို သတိထား မိကြလား မသိဘူးနော် ။
ဥပမာ တစ်ခု အနေနဲ့ ဒီ ( ပြဿနာ ) ဆိုတဲ့ စာလေးကို ပဲ သူငယ်ချင်းတို့ PC ရဲ့ fireox browser ပေါ်မှာ စမ်းပြီး ရိုက်
ကြည့်လိုက် ဘယ်လိုနေ သလဲလို့ ...
ပုံ ( ၁ )
ကျွန်တော် သတိထား မိတာတော့ ကြာပြီဗျ ဘယ်လို လုပ်ရမှန်း မသိလို့ စဉ်းစားနေတာ အခုတော့ အဆင်ပြေ သွား
ပုံ ( ၂ )
ပုံ ( ၂ ) မှာလို အဆင်ပြေတဲ့ သူတွေ ကတော့ ကျော်သွား လိုက်ပေါ့နော်
ပုံ ( ၁ ) မှာလို အဆင် မပြေတဲ့ သူတွေ ကတော့ အောက် မှာ Smart Zawgyi Pro ကို download ယူပြီး PC မှာ
install လုပ် လိုက်ပါ။
Smart Zawgyi Pro အား အောက်က လင့်တွေ မှာ ဒေါင်းလုပ် ရယူ နိုင်ပါတယ် ။
Smart Zawgyi Pro ကို PC မှာ install လုပ်တဲ့ အခါမှာ တစ်ချို့ window တွေမှာ click နှစ်ချက် နှိပ်ပြီး install
လုပ်လို့ ရပေမဲ့ တစ် ချို့ window တွေမှာ မရ ခဲ့ရင် Smart Zawgyi Pro ကို copy ကူးပြီး control panel /
font folder ထဲမှာ သွားထည့် လိုက်ပါ။
window 8.1 သမားတွေက Smart Zawgyi Pro ထည့်ပြီးလို့ အဆင်မပြေ သေးဘူး ဆိုရင် control panel /
Font folder ထဲက အရင် သုံးနေတဲ့ Zawgyi-One ကို Delete လုပ်ပေး လိုက်ပါ။
ပြီးသွားရင် Firefox browser ကိုဖွင့် Option / content ထဲမှာ Smart Zawgyi Pro ကို လိုက်ပြောင်းပေး
ကျွန်တော် window7Home Premium / window7Ultimate / window 8.1 တွေမှာ စမ်းကြည့်တာ အ
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, August 24, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Browser, FireFox, မြန်မာဖေါင့်
Android Phone မှာ Firefox OS Apps များကို အသုံး ပြုနည်း
အခု ဆိုရင် Android Phone မှာ Firefox OS Apps များ ကို အသုံးပြု နိုင် ပါ ပြီ။ Firefox OS Apps များ ဟာ Open Web Apps များ ဖြစ် ပြီး Firefox Browser (Android) ကနေ တစ် ဆင့် Android Phone မှာ အသုံး ပြု နိုင် အောင် Mozilla က ပြု လုပ် ပေး လိုက် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ Firefox OS Apps များ ကို ရယူ ဖို့ ပြု လုပ် ပေး ထား တဲ့ Firefox Marketplace ဟာ Android Phone ပိုင်ရှင် များ အတွက် Google Play Store လို ဖြစ် လာ ပါပြီ။
Firefox OS ဆိုတာ
Mozilla က သမရိုးကျ စမတ်ဖုန်း Apps များကို OS မျိုးစုံ မှာ အသုံး ပြုလို့ ရတဲ့ Web Apps များ နဲ့ အစား ထိုး ချင် ပုံ ပါပဲ။ သင် ဟာ Firefox OS Marketplace ဒါမှ မဟုတ် App Store များ ကနေ Apps များ ကို ၀ယ်ယူ နိုင်မှာ ပါ။ အဲ ဒီ App များ ဟာ Firefox OS, Android နဲ့ အခြား ပ လက် ဖောင်း များမှာ အသုံးပြု နိုင်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။ သင် ၀ယ်ယူ လိုက်တဲ့ App ဟာ ပလက် ဖောင်း တစ်ခု ထဲမှာ သာ မက ဖုန်း ပြောင်း ကိုင်တဲ့ အခါ မှာ လည်း အဲဒီ ဖုန်း အသစ် မှာ အသုံး ပြုနိုင် မှာပါ။
Firefox OS ဟာ Web ကို အခြေ ပြု ထား တာ ပါ။ Firefox OS App တစ်ခု ဟာ Firefox အ တွက် ရည်ရွယ် ရေးသား ထားပြီး Dialer, Sensors နဲ့ အခြား စွမ်း ဆောင် ချက် များ ကို အသုံး ပြုနိုင် ဖို့ Firefox ရဲ့ API အသစ် ကို အသုံး ပြု ထား ပေမယ့် Web App တစ်ခုပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ Mozilla က Android အ တွက် Firefox App ကို ပြု လုပ် ပေး ထားပြီး အဲဒီ Firefox App က Mozilla ရဲ့ Gecko Rendering Engine ကို အသုံး ပြု ပါတယ်။ Firefox (Android) နဲ့ Firefox OS တို့ ကို တူညီ တဲ့ နည်းပညာ တစ်ခု ထဲနဲ့ ဖန်တီး ထားလို့ Firefox OS Apps များ ဟာ Firefox Browser ကနေ တစ် ဆင့် Android မှာ အလုပ် လုပ် ကြ တာပါ။ Apple က တော့ သူတို့ ရဲ့ Browser Engine ကို ဖန်တီး ဖို့ ခွင့်ပြု ထားခြင်း မရှိ ပါဘူး။ အဲဒီ အတွက် Firefox OS Apps များ ကို iPhone or iPad တို့မှာ အသုံး ပြုလို့ မရ ပါဘူး။ PC မှာ အသုံးပြု ချင်ရင် တော့ Firefox OS Simulator နဲ့ သုံး နိုင် ပါတယ်။
ဒါဟာ Mozilla ရဲ့ ရေ ရှည် စီမံကိန်း ပါ။ အခု အချိန် မှာ တော့ Firefox OS Marketplace မှာ Apps များ နည်း ပါး နေသေး ပြီး ပလက်ဖောင်း တိုင်း မှာ အသုံး မပြုနိုင် သေးပါဘူး။ Android မှာ အသုံးပြု လို့ ရအောင် ပြုလုပ် ပေးလိုက် တဲ့ အတွက် Open Web Apps များ ကို ဖန်တီး ဖို့ Developer များ ကို တွန်း အားပေး လိုက် သလို ပါပဲ။
Firefox OS Apps များကို Android မှာ အင်စတော လုပ်နည်း
ပထမ ဆုံး Firefox Browser (Android) နောက် ဆုံး ဗားရှင်း ကို Android Phone မှာ အင်စတော လုပ်ရ မှာပါ။ အောက် က လင့်က နေ Google Play Store မှာ ရယူ နိုင်ပါတယ်။
Google Play Store မပါ တဲ့ Android Device များ အ တွက် Mozilla ရဲ့ FTP Servers ကနေ APK ဖိုင်ကို ရယူ နိုင် ပါတယ်။ ဒီ နည်း ကို သုံး ရင် Firefox ရဲ့ နောက် ဆုံး ဗားရှင်း ကို လိုချင် တိုင်း အောက် က လင့် ကနေ ဒေါင်း လုပ် ပြုလုပ် ပြီး အင်စတော လုပ် ရမှာပါ။
Firefox Browser ကို ဖွင့် ပြီး Home Page မှ Top Sites ရဲ့ အောက် မှာ Thumbnail အနေ နဲ့ ပြ ထား တဲ့ Firefox Marketplace ကို နှိပ် ပါ။
ဒါမှ မဟုတ် အောက် မှ ၀က်ဆိုက် လိပ်စာ ကို Address Bar မှာ ရိုက် ထည့်ပါ။
Firefox OS App တစ်ခု ကို အင်စတော မလုပ် ခင်မှာ Android Settings ထဲမှ Unknown Sources မှာ အမှန် ခြစ် ပေး ထား ဖို့ လို ပါ တယ်။ ဒီလို မလုပ် ထား ရင် အင်စတော လုပ် ချိန်မှာ Install blocked ဆိုတဲ့ စာသား ကို တွေ့ ရ မှာပါ။ Android Settings App ကို ဖွင့် ပါ။ Security ထဲ သွားပြီး Unknown Sources မှာ အမှန် ခြစ် ပေးပါ။
ဒီလို လုပ်ခြင်း ဖြင့် Google Play Store ပြင်ပ မှ Apps များ ကို အင်စတော လုပ်နိုင် ပါပြီ။ ဥပမာ အား ဖြင့် Amazon App Store, Firefox Marketplace ဒါမှ မဟုတ် Developer ရဲ့ ၀က်ဆိုက် ကနေ တိုက် ရိုက် အင်စတော လုပ်နိုင် တာပါ။ ဒါပေမယ့် Google Play Store ပြင်ပ မှ Apps များကို အင်စတော လုပ်ရင် သတိ ထားပါ။ မယုံ ကြည် ရတဲ့ ၀က်ဆိုက် တွေ ကနေ အင်စတော လုပ် မိရင် Malware များ ကူး စက်နိုင် လို့ပါ။ Android Malware များ အဓိက ကူးစက် တဲ့ နေရာ ဟာ Google Play Store ပြင်ပ က ဖြစ် ပါတယ်။
Settings ထဲမှာ Unknown Sources ကို Enable လုပ် ပြီးရင် Firefox Marketplace မှာ လိုချင် တဲ့ App ကို ရှာပြီး အင်စတော လုပ်ပါ။ Free ဒါမှ မဟုတ် အခပေး Apps များ ဆိုရင် ဈေးနှုန်း ကို နှိပ်ပြီး အင်စတော လုပ်ပါ။ အင်စတော လုပ် ရင် Android App ကို အင်စတော လုပ် သ လိုပဲ တွေ့ ရမှာ ဖြစ် ပါတယ်။
Android မှာ Firefox OS App များကို အသုံး ပြုခြင်း
Firefox OS App ကို အင်စတော လုပ် ပြီး ရင် Firefox Browser ကို သုံးစရာ မလိုဘဲ Apps များ ကို သုံးနိုင် ပါတယ်။ App Drawer မှာ အိုင်ကွန် ကို ပြ ထား ပေး မှာပါ။ Home Screen မှာ လည်း Shortcut ထားရှိ နိုင် ပါတယ်။ Shortcut ကို နှိပ် ပြီး App များကို ဖွင့်နိုင် ပါတယ်။ App များ ဟာ Firefox OS ဖုန်း တွေ မှာ လိုပဲ အလုပ် လုပ်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။
Firefox OS App များ ဟာ Firefox Browser ကို နောက် ကွယ်မှာ အသုံးပြု ကြ တာပါ။ အဲဒီ အတွက် Firefox Browser ကို ဖုန်း ကနေ Uninstall လုပ် လိုက် ရင် App များကို ဖွင့်ရင် အလုပ် မလုပ်ဘဲ Google Play Store မှာ Firefox Browser ကို အင်စတော လုပ် ခိုင်း မှာပါ။
Open Web Apps များ ကို Android ရဲ့ Multitasking Interface မှာ ပြသ ပေးမှာ ဖြစ်လို့ Firefox Browser မှာ Tabs များနဲ့ အမြင် မရှုပ် စေပါဘူး။
Mozilla ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် က ကောင်းမွန် ပြီး Firefox OS Apps များ ကို ပလက်ဖောင်း တိုင်းမှာ အသုံးပြု နိုင် မှာပါ။ ဒါပေ မယ့် အခု လော လော ဆယ် မှာ တော့ Firefox OS App များ ဟာ နည်းပါး နေပါ သေး တယ်။ နောက် ပြီး Firefox OS Apps များ ဟာ Web Apps များ ဖြစ် တာ ကြောင့် မိုဘိုင်း App များ ထက် စာရင် စွမ်းဆောင်ရည် နိမ့်ကျ နေပါ သေး တယ်။ Mozilla က ဒီပြသနာ ကို ဖြေရှင်း နိုင် ရင် Firefox OS Apps များ ဟာ
အောင်မြင် လာနိုင် ပါတယ်။
Myanmar Digital Life Journal မှ ကူးယူ မျှဝေသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, August 01, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Android, FireFox, Phone Application, လမ်းညွှန်
Register မလုပ်ချင်တဲ့ ၀က်ဆိုက်များတွင် ကျော်၍ အသုံးပြု ခြင်း
အင်တာနက် အသုံးပြုတဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ တစ်ခါ တလေမှာ Download တွေ ပြုလုပ်ချင် တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အ
ခြားသော ၀က်ဆိုဒ်စာမျက်နှာ များစွာမှာ အကြောင်း အရာတစ်ခုကို သိရှိလိုတဲ့အခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Register
ပြုလုပ်ခိုင်းတဲ့ အခါမျိုးမှာ မပြုလုပ်ချင်ဘဲ Download ဆွဲချင်သူတွေ၊ စာဖတ်ချင်သူတွေအတွက် Firefox က
နေ Add-on ထည့်သွင်းပြီး ကျော်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
4Share လို Download Site တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားသော ဆိုက်တစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Register မလုပ်ချင်တဲ့အ
ခါမှာ ဒီအဆင့်ကို ကျော်လွှားဖို့အတွက် Log in with BugMeNot ဆိုတဲ့ Add-on ကို ထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြု
နိုင်ပါတယ်။ ဒီ Add-on ဟာ ကိုယ် အသုံးပြု ချင်တဲ့ ဆိုက်မှာ ယာယီ အကောင့် တစ်ခုကို အလို အလျောက်
ထည့်ပေးပြီး ယာယီအသုံးပြုခွင့်ရအောင် ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Log in with BugMeNot ကို Install ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် အောက်ကလင့်ကို နှိပ်ကာ သွားပြီးရယူ ရမှာ
အဲဒီ Add-on လေးကို ထည့်သွင်းဖို့ Add to Firefox ဆိုတဲ့ Button ကို နှိပ်လိုက်ရင် ဒေါင်းလုတ် ပြုလုပ်ပြီး
အသုံးပြုပုံကတော့ ကိုယ် Log in ၀င်ရမယ့်နေရာက User Name Box နေရာလေးမှာ Right Click ကို နှိပ်
လိုက်ပါ။ ဒါဆို ရင် Popup Menu ရဲ့ အောက် ဆုံးမှာ Log in with BugMeNot ဆိုတဲ့ Button လေး ကို
တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါလေးကို ရွေးချယ် လိုက်ရင် Random Account တစ်ခု ချပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလစ် တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ကိုယ် အသုံးပြုချင်တဲ့ ဆိုက်ကို ကျော်ပြီး ကြည့်ရှု အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေ
မဲ့ ဒီ Add-on ကို ဆိုက်ဒ်တိုင်းမှာတော့ အသုံးပြုနိုင်မှာ မဟုတ်ဘဲ အချို့သော ဆိုက်တော်တော်များများမှာ
သာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, May 07, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ AddOn, FireFox
Mozilla Thunderbird 24.4.0 Final Latest Version
Mozilla Thunderbird 24.4.0 Final | 21.39 MB
Thunderbird is Mozilla’s next generation e-mail client. Thunderbird makes e-mailing safer, faster, and easier than ever before with the industry’s best implementations of features such as intelligent spam filters,abuilt-in spell checker, extension support, and much more.
Thunderbird gives youafaster, safer, and more productive e-mail experience.
We designed Thunderbird to prevent viruses and to stop junk mail so you can get back to reading your mail.
Read on to find out more about the reasons why you should use Thunderbird as your mail client and RSS reader.
* Mail Account Setup Wizard
* Quick Filter Toolbar
Customize Your E-mail Experience
* Thunderbird Look & Feel
* Add-ons Manager
Secure and Protect Your E-mail
Download Mozilla Thunderbird 24.4.0 Final ( 21.39 MB )
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, March 20, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ FireFox, Internet
Firefox မှာ Bookmark တွေကို စီမံ ခန့်ခွဲမယ်
Internet အသုံးပြု သူတွေ အနေနဲ့ မိမိနှစ်သက်တဲ့ web sites တွေကို မှတ်သား ထားကြတဲ့ အတွက်
အချိန် ကြာလာတာနဲ့ အမျှ bookmarks တွေ များပြားလာပြီး organize လုပ်ဖို့ လိုလာပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါး မှာ firefox bookmarks တွေကို alphabetically sort လုပ်ပေး နိုင်တဲ့ auto-sort book
marks နဲ့duplicate bookmarks တွေကို ရှာပြီးဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ bookmark deduplicator ဆို တဲ့
add-on နှစ်ခု အကြောင်းရေးပါမယ်။
Auto-Sort Bookmarks ကို အင်စတော လုပ်ပြီးရင် add-on manager ထဲက auto-sort bookmarks
ရဲ့ options ထဲမှာ Autosort မှာ အမှန်ခြစ်နဲ့ တွေ့မြင်နိုင်ပြီး bookmarks တွေကို alphabetically အလို
လို sort လုပ်ပေးမှာပါ။
Autosort မလုပ်ချင်ရင် အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပြီး manual လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Manual လုပ်ဖို့Add-on bar က
auto-sort bookmarks အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ရမှာပါ။ Sort bookmark bar ကတော့ Bookmark bar က
bookmarks တွေကို sort လုပ်ဖို့ မလုပ်ဖို့ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Sort Order မှာ folder , bookmarks တွေရဲ့sort order ကို drag and drop လုပ်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်
Manual လုပ်တဲ့သူတွေ အတွက် Add-On Bar က Auto-Sort Bookmarks အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။ အိုင်
ကွန်ကို ရှာမတွေ့ ရင် Alt နှိပ်ပြီး Menu Bar က View>Toolbar>Customize ထဲဝင်ပြီး အိုင်ကွန်ကို
drag and drop လုပ်ပြီး Add-on bar ပေါ်တင်ပါ။
Bookmard Deduplicator ကို အင်စတောလုပ်ပြီးရင် add-on manager ထဲက Bookmark Dedupli
cator Options ထဲကိုသွားပြီး Start ကိုနှိပ်ရင် duplicates bookmarks တွေကို ရှာပေးပြီးဖျက်နိုင်ပါ
Digital Life Journal မှ ကူးယူ မျှဝေသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, March 19, 2014 No comments:
YouTube Player ရဲ့ အရွယ် အစားကို နှစ်သက် သလို ပြောင်းလဲ နိုင်မယ့် YouTube Resize
YouTube မှာ ဗီဒီယို ကြည့်တဲ့ အခါမှာ Player ရဲ့ အရွယ်အစား ကို Small, Medium, Full
Screen စသဖြင့် သုံးမျိုးပြောင်းလဲကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Player ရဲ့ အရွယ်အစား ကို နှစ်သက်
သလို ပြောင်းချင်ရင် YouTube Resize ဆိုတဲ့ Extension ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
YouTube Resize ကို Chrome, Firefox နှစ်မျိုှးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Extension ကို အင်စတော လုပ်ပြီးရင် Player ရဲ့ ထောင့်စွန်း တွေ အပေါ် Mouse Cursor
တင်ကြည့်ရင် မျှားပုံသဏ္ဍာန် ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Drag ဆွဲပြီး နှစ်သက်ရာ အရွယ်
အစား ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ Page ရဲ့ အပေါ်ဆုံးမှာ Video Player ကို ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါ
တယ်။ Related Video တွေကို Player ရဲ့ အောက်မှာ ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Resize Extension က Embedded Videos တွေမှာ အလုပ်မလုပ်ဘဲ YouTube ၀က်ဆိုက်
မှာ ပဲ အလုပ်လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား ၀က်ဆိုက်တွေက YouTube Video Player တွေ
ကို Resize မလုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး YouTube ရဲ့ Flash Player နဲ့ ပဲ အ
လုပ်လုပ်ပြီး HTML5Player နဲ့ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
Resize Extension ကို Chrome နဲ့ Firefox တို့အတွက် အောက်က လင့် မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Digital Life Journal မှကူးယူမျှဝေသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, March 06, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ AddOn, FireFox, Google
Waterfox 27.0.2 Final Full Version Free Download
Waterfox 27.0.2 Final | 28.13 MB
Changes in Firefox 24.0:
* Startup performance improvements (bugs 715402 and 756313)
* Experience better image quality with our new HTML scaling algorithm
* Certain valid WebGL drawing operations are incorrectly rejected, leaving incomplete rendering in affected pages (825205)
* Starting Firefox with -private flag incorrectly claims you are not in Private Browsing mode (802274)
* Plugins stop rendering when the top half of the plugin is scrolled off the top of the page, in HiDPI mode (825734)
* New download experience. Learn more.
* Ability to close hanging plugins, without the browser hanging
* Continued performance improvements around common browser tasks (page loads, downloads, shutdown, etc.)
* Continued implementation of draft ECMAScript6– clear() and Math.imul
* getUserMedia implemented for web access to the user’s camera and microphone (with user permission)
* ‘canvas’ now supports blend modes
* Various ‘audio’ and ‘video’ improvements
* Details button on Crash Reporter (793972)
* Unity plugin doesn’t display in HiDPI mode (829284)
* The Social API now supports multiple providers
* Enhanced three-state UI for Do Not Track (DNT)
* Firefox will suggest how to improve your application startup time if needed
* Preliminary implementation of Firefox Health Report
* Ability to restore removed thumbnails on New Tab Page
* CSS -moz-user-select:none selection changed to improve compatibility with -webkit-user-select:none (bug 816298)
* Graphics related performance improvements
* Removed E4X support from Spidermonkey
* Implemented Remote Profiling
* Integrated add-on SDK loader and API libraries into Firefox
* Added support for ‘main’ element
* Implemented scoped stylesheets
* Added support for ‘window.crypto.getRandomValues’
* Some function keys may not work when pressed (833719)
* Browsing and Download history clearing needs unification to avoid confusion on clearing download history
* WebRTC is now enabled by default!
* Windows: Firefox now follows display scaling options to render text larger on high-res displays
* HTML5 audio/video playback rate can now be changed
* Social services management implemented in Add-ons Manager
* asm.js optimizations (OdinMonkey) enabled for major performance improvements
* Improved WebGL rendering performance through asynchronous canvas updates
* Plain text files displayed within Firefox will now word-wrap
* For user security, the |Components| object is no longer accessible from web content
* Pointer Lock API can now be used outside of fullscreen
* CSS3 Flexbox implemented and enabled by default
* New Web Notifications API implemented
* New built-in font inspector
* New HTML5 ‘data’ and elements
* Scrolling using some high-resolution-scroll aware touchpads feels slow (829952)
* Mixed content blocking enabled to protects users from man-in-the-middle attacks and eavesdroppers on HTTPS pages
* Options panel created for Web Developer Toolbox
* Improved about:memory’s functional UI
* Simplified interface for notifications of plugin installation
* Enabled DXVA2 on Windows Vista+ to accelerate H.264 video decoding
* Users can now switch toanew search provider across the entire browser
* CSP policies using the standard syntax and semantics will now be enforced
* (input type=’file’/) rendering improvements (see bug 838675)
* Replace fixed-ratio audio resampler in webrtc.org capture code with Speex resampler and eliminate pseudo-44000Hz rate
* “Load images automatically” and Always show the tab bar” checkboxes removed from preferences and reset to defaults
* HTML5 (input type=”range”/) form control implemented
* Write more accessible pages on touch interfaces with new ARIA role for key buttons
* Social share functionality
* Added unprefixed requestAnimationFrame
* Implementedaglobal browser console
* Dropped blink effect from text-decoration: blink; and completely removed ‘blink’ element
* New feature in toolbox: Network Monitor
* Removed support for Revocation Lists feature
* Performance improvements on New Tab Page loads
Download Waterfox 27.0.2 Final ( 28.13 MB )
Ref: softwares free download latest version by Fun Mujja
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, March 03, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ Browser, FireFox
Mozilla Firefox for Linux Ubuntu Download (32bit + 64bit)
အခု Linux အတွက် နောက်ဆုံးထွက် Mozilla Firefox လေးပါ။ 64 bit အတွက်ပါ ပါတယ်။
စုစုပေါင်း 29mb ရှိပါတယ်။
This is one of the most popular web browser on the Internet, the Linux/UNIX edition
The Firefox browser isafast, small and very easy to use browser that offers many advantages over other web browsers, such as the ability to block pop-up windows and the tabbed browsing experience.
Mozilla Firefox features comprehensive pop-up controls to keep unwanted advertising off your desktop,atab browsing mode that lets you open several pages inasingle window, allowing you to load links in the background without leaving the page you're on, integrated search (powered by Google, Bing, Yahoo, etc.), industry leading accessibility with Find As You Type - find links and page text by simply typing.
Moreover, Mozilla Firefox also includes simplified privacy controls that let you cover your tracks more effectively,astreamlined browser window that lets you see more of the page than any other browser while at the same time being more configurable,alarge variety of free downloadable extensions and themes that add specific functionality and visual changes to the browser.
Download For 32 - bit Download For 64 - bit
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, February 16, 2014 1 comment: